न्यानो सम्बन्ध - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
मिडिया > जर्नल फोकस फोकस > पत्रिका फोकस यीशु 2019-03 > गर्म सम्बन्ध
यो खुशीको समय हो, खुशीको समय, लापरवाह र आनन्दित सम्बन्धमा आनन्दित। एक अर्काको छेउमा बस्दै, एक स्वादिष्ट खानाको मजा लिदै र एकै समयमा कुराकानीको दौरान मैत्री सम्बन्ध खेती गर्दै। अगाडिको चित्रको चर्चित भीडले मलाई धेरै नै प्रेरणा दिन्छ। बच्चाहरू र नातिनातिनाहरूले आफ्ना हाँसोका साथ ठूला मानिसहरूलाई उत्साहित गर्छन् र आरामदायक र उत्साहजनक घण्टा सँगै बिताउँछन्।
के तपाईं पहिले नै यस्तो प्रेरणादायी घटना अनुभव गर्न चाहानुहुन्छ? हुनसक्छ तपाईं विगतको बारे बढि जान्न चाहानुहुन्छ वा एक आगन्तुकलाई तपाईंले ख्याल गर्नुहुन्छ र उहाँ वा उनीसँग तपाईंको सम्बन्ध गाढा बनाउन चाहनुहुन्छ।
म तपाईंलाई Zacchaeus को प्रसिद्ध कहानी साझा। ऊ धनी मानिस थिए, यरीहोका शीर्ष कस्टम अधिकारी थिए र थोरै छोटो थिए। येशू हिंडिरहनु भएको थियो भन्ने निश्चित हुनको लागि ऊ एउटा तुतीको रूखमा चढ्यो। ऊ येशू चाहँदैनथ्यो।
जब येशू त्यो रूख भएर जानुभयो, उहाँले माथि हेर्नुभयो र भन्नुभयो: "जक्कै, चाँडै तल ओर्ले! म आज तपाईंको घरमा पाहुना हुनु पर्छ। » सकेसम्म छिटो, जक्कै रूखबाट ओर्लेर आए र येशूलाई खुशीसाथ आफ्नो घरमा लगे। धेरै मानिसहरूले यो देखेर क्रोधित भए। "त्यस्तो पापीले उसलाई कसरी निम्तो दिन सक्छ!"
तर जक्कैस प्रभुको सामु आए र भने: "प्रभु, म मेरो सम्पत्ति को आधा गरीबहरुलाई दिनेछु र यदि मैले कसैलाई ब्ल्याकमेल गरेको छु, म उसलाई चार गुणा फिर्ता दिनेछु।" तब येशूले भन्नुभयो: "यो दिनले यस घरमा मुक्ति ल्याएको छ, किनकि यो मानिस अब्राहामको छोरा पनि हो" (लूका १:: १-from बाट)।
न्यानो सम्बन्ध गाँस्नको लागि हाम्रो हृदय खोल्न हामीमाथि निर्भर छ, यो येशूको होस्, छिमेकी वा आफैलाई। प्रश्न यो हो: के म मायालु, उदार पाहुना हो वा ध्यान दिएर पाहुना पाहुना पाहुना हो? जे भए पनि, मलाई न्यानो सम्बन्ध कायम गर्न चुनौती छ। र मेरो मनोवृत्तिले ठीकै देखिन्छ कि मैले प्रेमले मलाई डो guide्याउन दियो कि भनेर। प्रेम केवल एक अस्थायी भावना मात्र होइन, तर परमेश्वर र आफ्ना बच्चाहरूको परिभाषित विशेषता हो। यसैले तपाईंको स्वभाव येशू ख्रीष्टको भाइ वा बहिनीको रूपमा छ, यदि तपाईंको सम्बन्धमा फेरि केही गडबडी भयो भने, रूखबाट तल झर्नुहोस् र तपाईंको तनावपूर्ण सम्बन्धलाई सफा गर्नुहोस्। यसले तपाईंलाई प्रेमलाई स्वीकार्न एक अद्वितीय पाहुनाको रूपमा छुट्याउँदछ, जस्तो कि यसले पाहुनालाई आफ्नो प्रेम र ध्यान दिन पाहुनालाई छुट्याउँछ।
साथीहरु वा आफन्तहरु संग अर्को बैठक को लागी, म तपाईलाई धेरै रमाईलो र आरामदायी घण्टा दिन चाहन्छु!